Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Gabriel Barbosa Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Ihe omuma anyi nke Gabriel Barbosa na agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ka o buru, Web, Net Worth and Life Life.
Na nkenke, anyị na-egosi akụkọ ihe mere eme nke a Football ọgụgụ isi na aha otutu "Gabigol". Ọ malitere site na mgbe ọ bụ nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama dị ka onye na-eme egwuregwu.
Iji mee ka ị nụrụ ụtọ ọdịdị nke mmụọ Gabriel Barbosa's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Marcelo Brozovic Akụkọ nwata na mgbakwunye Eziokwu Biography
Ndụ na ịrị elu nke Gabriel Barbosa.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ụdị ebumnuche ya na nka teknụzụ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Gabriel Barbosa nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Gabriel Barbosa Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Gaanụ egwuregwu ọkpụkpọ Gabriel Barbosa Almeida Amụrụ na 30th nke August 1996, na obodo São Bernardo do Campo, na mpụga São Paulo na Brazil.
Ọ bụ onye mbụ n'ime ụmụ abụọ mụrụ nne ya, Lindalva Barbosa na nna ya, Valdemir Barbosa. Lee, foto nke nne na nna Gabriel Barbosa n'oge njikọ ha.
Gabriel Barbosa ndị nne na nna- Valdemir na Lindalva.
Egwuregwu bọọlụ dị ịtụnanya nke amaala mba Brazil na ezinụlọ sitere na Portuguese bụ nke a zụlitere na ntọala ezinụlọ n'etiti ụlọ na Montanhão, n'obodo mụrụ ya ebe o toro n'akụkụ nwanne ya nwanyị nke obere, Dhiovanna Barbosa.
Na-etolite na Montanhão nwa okorobịa Gabriel nwere nwata na-ahụ n'anya na-ahụ n'anya nke na-eme ihe ike na-emegharị na mpaghara.
Ọgba aghara ahụ na-esiri ike mgbe ụfọdụ na ọgba aghara dị nso na-ezigara nwatakịrị ahụ mgbe ahụ na ndị mụrụ ya na-achọ nchekwa n'okpuru tebụl na sofa.
Nwa okorobịa Gabriel nwere nwa agbọghọ hụrụ football n'anya mgbe ọ na-etolite na agbata obi Montanhão.
Gabriel Barbosa Nwatakiri Akụkọ - Agụmakwụkwọ na Ọrụ Buildup:
Mgbe ọ bụla Gabriel na-anọghị n'okpuru tebụl ma ọ bụ sofa ọ na-aga n'okporo ámá iji gbaa bọlbụ dị ka ọtụtụ ụmụaka ọgbọ ya. N'ịbụ onye nkwado ịhụnanya nke ezinụlọ ya kwadoro, Gabriel malitere ọzụzụ na egwuregwu egwuregwu bọl a na-akpọ Futsal.
N'oge na-adịghị anya tupu 8 ​​afọ ahụ amalite igosi egwuregwu egwuregwu futsal asọmpi maka obere akụkụ nke ụlọ ụlọ ya - Sao Paulo.
Victor Lindelof nwa akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
N'ụbọchị egwuregwu a na-atụ anya megide Santos, Gabriel gosipụtara nkà dị egwu nke mere ọchị akụkọ Santo bụ Zito.
N'ihi ya, a kpọrọ Gabriel ka o sonyere usoro ndị ntorobịa nke Santo FC ebe ọ ga-etinye akụkụ ka mma nke oge mbụ ọ na-egwu n'akụkụ ezigbo enyi ya Neymar Jr.
Foto a na - eto eto nke nwa agbọghọ Gabriel Barbosa na Neymar Jr n'oge ntorobịa ntorobịa ha na Santos FC.
Gabriel Barbosa Akụkọ nwata - Ndụ Ndụ Mmalite:
Mgbe ọ nọ na Santos, Gabriel na-enwu ka ọ na-eto site na nwata site na ntorobịa. Ka ọ na-erule oge Gabriel ruru afọ asatọ ya na klọb ahụ, ọ nwere ndekọ dị ịtụnanya nke na-erughị ihe mgbaru ọsọ 600 na ịgụta ọnụ.
Rafa Silva Childhood Story Plus Ihe Ndi Utold Biography Eziokwu
Dị ọdịdị dị egwu dị otú ahụ mere ka aha aha Gabriel "Gabigol" wee mee ka ọ bụrụ ebe dị n'akụkụ obere Brazil.
Mgbe ọtụtụ ihe na-amasị Gabriel, onye nkụzi Santos n'oge ahụ, Muricy Ramalho kpọrọ Gabriel ka ọ malite ịmalite ọzụzụ na ndị isi ụlọ ọrụ.
Santos FC gara agbụ Gabriel na nkwekọrịta ogologo oge nke € 50million ma jiri obi ụtọ na-ele ya ka ọ nọgide na-enwe ụdị mgbe ọ malitere mmalite ya dị ka 16 afọ.
Samuel Eto'o Ụmụaka Akụkọ Karịa Eziokwu Ihe Nlekọta
Gabriel Barbosa dị afọ iri na isii mgbe Santos nyere ya nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na 16.
Gabriel Barbosa Biography Eziokwu - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
2016 bụ ngwakọta nke afọ ọma na ihe ọjọọ maka Gabriel. Iji bido na nke ọma, ọ kpọrọ oku ka ọ sonyere ndị otu egwuregwu Brazil maka Rio 2016 wee nyere ndị nọ n'okpuru 23 aka inweta nrite ọla edo na nke mbụ na akụkọ ntolite ha.
Mgbe egwuregwu Olympic gasịrị, Gabriel nwetara nkwaga na Inter Milan ebe ọ gbalịsiri ike ịchọta ụkwụ ya.
N'ịbụ onye na-enwe ndidi na Gabriel, Inter Milan nyere ya Benfica ebe ọgụ ya na-aga n'ihu.
N'elu ọnụ ọgụgụ Gabriel na-aga Italytali, ndị agbapụ na ndị odeakụkọ zoro mmiri na-akatọ ya na ụfọdụ na-atụ aka na ọ buru oke ibu na ekwesighi aha aha ya "Gabigol" Nke guzoro maka isi ihe mgbaru ọsọ.
Gabriel Barbosa enweghị mmasị na Inter Milan na Benfica mere ka ọ ghara ịdị na-egwu egwu ebe ọtụtụ ndị kwuru na ọ buru oke ibu.
Gabriel Barbosa Biography - Nbilite Na-ewu ewu Akụkọ:
E mechara nye Gabriel ụlọ nwata nwoke Santos ebe ọ gbapụtara onwe ya site n'ịghọ onye kachasị akara na mbipụta 2018/2019 nke Brasileirão na ihe mgbaru ọsọ 18.
Alexis Sanchez Ụmụaka Akụkọ Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
“Ezigbo ụlọ obibi” Gabriel na-eti mkpu mgbe ọ na-enweghị ike ịghọta otú ọ si nwute ya.
Gabriel Barbosa gbapụtara onwe ya na Santos FC nwere ụdị ihe mgbaru ọsọ na-emechi ọnụ nke mechiri ndị na-akatọ ya.
Ọdịnihu dị n'oge ederede, na-egwu egwu maka Flamengo FC ebe enwere ihe mgbaru ọsọ 34 na 40 anya!
Kedu ihe ọzọ? Gabriel egosila na ọ ga-enwe mmasị igwu egwu na Liverpool FC. Ọ bụ ezie na e nwere titbits nke ejighị n'aka na atụmatụ ahụ, akụkụ ọ bụla nke football Gabriel hụrụ onwe ya ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Gabriel Barbosa Love Life - Nwanyị Eziokwu:
N'ebe usoro ihe omume football nke Gabriel, ọ nwere ndụ ịhụnanya na-atọ ụtọ nke hụworo ka a mata ya Neymarnwanne nwanne - Rafaella Santos.
Amaghi ama ka enweela enyi nwanyị nke ọha na eze tupu ya amalite ịlụ Rafaella na 2017.
Ha dated maka ọnwa ole na ole tupu ha agawa ụzọ dị iche iche mana ịmaliteghachi ọkụ ochie na Eprel 2019. Ọ dịghị nke ịhụnanya nnụnụ nwere nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị n'alụghị di ma ọ bụ nwunye mgbe ndị na-akwado mmekọrịta ha nwere olileanya na duo na-ewere ihe na ọkwa ọzọ site na itinye aka n'oge na-adịghị anya .
Gabriel Barbosa nwere mmekọrịta ịhụnanya na enyi nwanyị Neymar Jr Rafaella Santos.
Gabriel Barbosa Ezigbo Ndụ Ezinụlọ:
Ọ na-ewe ezinụlọ iji wuo onye na-egwu egwu dị ka Gabriel. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndụ ezinụlọ Gabriel na-amalite na nne na nna ya.
Banyere nna na nne Gabriel Barbosa: Lindalva & Valdemir Barbosa bụ nne na nna Gabriel.
Ndị nne na nna na-enweghị obere ezinụlọ mere ka Gabriel gaa football mgbe ọ dị obere ma mgbe ụfọdụ gbaziri ego iji mee ka onye na-egwu egwuregwu gaa maka ọzụzụ football.
Ha na-enwe obi ụtọ banyere ihe Gabriel ghọrọ ma na-egosipụtakarị foto nwata ya na ntanetị mmekọrịta ha iji kọọ akụkọ ya.
Foto dị obere nke Gabriel Barbosa na ndị mụrụ ya.
Banyere ụmụnne Gabriel Barbosa: Gabriel enweghị nwanne nwoke ma nwanne nwanyị nke obere akpọrọ Dhiovanna Barbosa.
Dhiovanna bụ ihe nlere anya nke Instagram nwere mmasị n'ịmụ asụsụ mba ọzọ. Ọ dị ezigbo nso nwanne ya nwoke nke okenye Gabriel na ọ tụrụ egbugbu ya iji chetara ya na ọ nọ nso mgbe niile n'agbanyeghị agbanyeghị njem ọ na-aga gburugburu ụwa.
Gabriel Barbosa na nwanne ya nwanyị.
Banyere ndị ikwu Gabriel Barbosa: Banyere nna ochie nke Gabriel Barbosa na ndụ ezinụlọ ya, amachaghị banyere nne na nna ya ochie ebe amatabeghị nna nna ya na nne nne ya n'oge edere.
N'otu aka ahụ, enweghị ndekọ banyere nwanne nna nna ya, nwanne nna ya na nwanne nna ya mgbe ọ na-enweghị ụmụ nwanne ma ọ bụ ụmụ nwanyị n'oge edere.
Gabriel Barbosa Ezigbo Ndụ Eziokwu:
Àgwà ndị na-akọwa Gabriel Barbosa bụ nke akara Virgo Zodiac. Ha gụnyere ikike ya maka amara, nkwekọ, asọmpi, na okike.
Na mgbakwunye, Gabriel nwere onye zuru oke ma na-ekpughe n'ụzọ zuru oke gbasara ndụ onwe ya na nke onwe ya.
Na-ekwu maka ọdịmma Gabriel na ihe omume ntụrụndụ ọ nwere ọtụtụ ọrụ mmemme nke gụnyere ịge egwu, egwu, igwu mmiri, ileta osimiri mara mma na iwepụta oge ya na ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya.
Gabriel Barbosa hụrụ igwu mmiri na iwepụta oge na osimiri.
Gabriel Barbosa Biography Eziokwu - Ldị Ndụ:
Ọ bụ ezie na Gabriel Barbosa nwere ọnụ ahịa ahịa nke € 23.00 nde n'oge edere, ọnụ ahịa ya ka amabeghị n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ na-akpata obere ụgwọ na ụgwọ ọnwa dị ka na December 2019.
N'ihi nke a, Gabriel anaghị ebi ndụ okomoko nke ndị egwuregwu rụzuru nwere ụlọ dị oke ọnụ ma na-agba n'ụgbọ ala mara mma.
Agbanyeghị, ọ nwere ezigbo ụgbọ ala na-agbanwe agbanwe ma mara otu esi etinye ezumike na ebe ntụrụndụ dị oke ọnụ gburugburu ụwa.
Gabriel Barbosa na-agbagharị n'ime ụgbọ ala ya nwere ike ịgbanwe.
Gabriel Barbosa Eziokwu Eziokwu:
Iji chịkọta akụkọ nwata anyị Gabriel Barbosa na akụkọ ndụ ebe a bụ akụkọ amachaghị ma ọ bụ akụkọ a na-akọwaghị nke ọma na akụkọ ndụ ya.
Smụ sịga na Mmanya: Enyereghị Gabriel Barbosa ị smokingụ sịga, ahụbeghịkwa ya ka ọ na-a enjoyingụ ọtụtụ mmanya.
Onye na-egwu egwuregwu ahụ na-elekwasị anya n'inwe ezi ahụike n'uche na ahụ ka ọ na-akwadebe iji nweta ihe ịma aka nke bọọlụ elu-elu na-eweta.
Ogbugbu: Eleghị anya otu n'ime ndị na-agba bọọlụ kacha egbu egbu na akụkọ ntolite nke egwuregwu ahụ, Gabriel nwere nka ahụ na azụ, aka, ụkwụ na olu.
Ndị a ma ama n'etiti egbu egbu bụ ihe osise nke nne na nna ya, nwanne ya nwanyị na ọdụm nwere oke egwu.
Echiche nke tattoos Gabriel Barbosa.
Religion: Igwe ọkpụkpọ egwu nwere ike ọ gaghị ekwu okwu banyere okpukpe mana egbugbu ya nke na-egosipụta onyinyo Jizọs na-ekwu oke banyere njikọta okpukpe ya, na mmekorita ya ga-akwado Katọlik.
Nwere ike ịhụ onyinyo Jizọs na aka nri aka nri Gabriel Barbosa?
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Gabriel Barbosa Childhood akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ efu efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Nuno Tavares Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography